वैदेशिक रोजगारीले दिएको पीडा |
प्रकाशित मिति :2017-03-03 18:01:09
सिरहा । धन कमाउन गएका श्रीमानकाे मृत्यु भएपछि लहान नगरपालिकाकी झौली सदायको सुखी र खुशी जीवन बाँच्ने सपना नै खोसिएको छ । झौली गर्भवती भएपछि सन्तानको सुन्दर भविष्य बनाउने भन्दै उनका श्रीमानले विदेश जाने निर्णय गरेका थिए ।
डेढ महिनाकी गर्भवती श्रीमतीलाई एक्लै घरमा छोडेर उनका श्रीमान् परदेश भासिए । दिनहरु राम्रैसँग बितिरहेका थिए । विदेशमा काम पनि रामै्र थियो । समय समयमा घरमा फोन भईरहन्थ्यो । दुःख सुख गर्दै झौलीले छोरा हुर्काइन् । श्रीमान विदेश जाँदा गर्भमा रहेको छोरा अहिले अढाई वर्षको भइसकेको छ । श्रीमान विदेशबाट फर्केपछि छोरालाई राम्रो शिक्षा दिउँला, घर बनाउँला भन्ने मीठा मीठा कल्पना गर्दै थिइन्, तर अचानक श्रीमानको दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएको खबर आयो । जुन सन्तानको भविष्य बनाउने भन्दै विदेशिएका थिए, उही सन्तानको अनुहारै देख्न नपाई उनी यो संसारबाट अस्ताए ।
झौलीलाई अहिले एकातिर श्रीमान्को मृत्युको पीडा छ भने अर्कोतिर छोराको लालनपालन र बाँकी जीवन कसरी विताउने चिन्ता छ । तर, यो भन्दा पनि ठूलो पीडा श्रीमान विदेशिंदा लिएको क्रणले उनलाई दिइरहेको छ । क्रणले गर्दा हिजोआज उनलाई निद्रा पर्न समेत छोडेको छ ।
‘कमाउन गएका श्रीमान रहेनन्, अब यो क्रण कसरी तिर्नु ?’ झौली व्यग्र हुँदै भन्छिन्, ‘काखको बच्चा छोडेर काम गर्न जान पनि सक्दिन, आफू के खाने हो ? बच्चालाई के ख्वाउने हो? अब कसरी जीन्दगी बिताउनु ?’
श्रीमानको मृत्यु भएपनि उनले क्षतिपूर्ति पाएकी छैनन् । सामान्य लेखपढ समेत गर्न नजान्ने झौलीलाई न्यायका लागि कहाँ जानु पर्छ, त्यो पनि थाहा छैन । कतिलाई गुहारिन् पनि तर, सहयोगी हातहरु भेटिनन् । झौलीका श्रीमान गाँउकै दलाल मार्फत विदेश गएका थिए । अहिले ती एजेन्ट गाउँमा छैनन् । कुन कम्पनीबाट, के कामको लागि श्रीमान् विदेसिएका थिए भन्ने केहि थाहा नपाएकी धौली राहतको लागि यताउता गरिरहेकी छिन् तर, राहत पाउने टुंगो छैन । ‘राहत पाइन्छ भन्ने सुनेकी छु, तर कसरी लिने हो थाहा छैन । राहत पाइन्छ भनेर बैंक खाता पनि खोलें तर, अहिलेसम्म आएको छैन’, उनी सुनाउँछिन् ।
लहान नगरपालिकाकै ककुल महतोको व्यथा पनि झौलीको भन्दा कम छैन । वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया गएका उनका श्रीमानको पनि विदेशमै मृत्यु भयो । उनले पनि क्षतिपूर्ति पाएकी छैनन् । ‘क्षतिपूर्तिका लागि कसले पहल गर्ने ? आफू रोगी छु, कहिँ जान सक्दिन, श्रीमान्को मृत्युपछि बेसहारा जस्तै भएकी छु’, उनी भन्छिन् । महतोलाई लामो समयदेखि टाउको दुख्ने समस्या छ ।
‘रोगी छ,ु मेरो छेउमा आएर बस्ने, मलाई सन्चो बिसन्चो सोध्ने कसैलाई फुर्सद छैन, श्रीमान् भइदिएको भए एक अर्काको दुःख सुख बाँडिन्थ्यो । छोराछोरी भएर पनि एक्लो हुनुपरेको छ’, तीन सन्तानकी आमा ककुलले भावुक हुँदै भनिन् । उनका दुई छोरा र एक छोरी छन् । दुईमध्ये एक छोरा विवाह गरेर अलग्गिएका छन् भने छोरीको पनि विवाह भइसकेको छ ।
ककुल र झौली जस्ता धेरै महिलाका श्रीमानले वैदेशिक रोजगारको क्रममा ज्यान गुमाएका छन् । यहिकारण सिरहामा धेरै महिला एकल भएका छन् तर, यसरी कति एकल भए, तिनले वैदेशिक रोजगार प्रर्वद्धन बोर्ड र बीमा बापत राहत रकम पाए कि पाएनन्, कुनै तथ्याङ्क छैन ।